Archive du 20170304
Hery Rajaonarimampianina Tsy tokony ho kandida intsony
Efa mazava ankehitriny fa iray amin�ireo kandida hifaninana amin�ny fifidianana filoham-pirenena amin�ny 2018 ny filoha am-perinasa, raha dinihina amin�ny fihetsiny tato ho ato.
FIZATO Tsy manaiky hatao fitaovana politika intsony
Tsy nahafa-po ny Firaisankinan�ny Zanaky ny faritanin�i Toamasina ny nitantanana ny fikambanana tao anatin�ny 14 taona farany.
Ho afa-bela foana ve e ?
Miarahaba ry Jean a ! Kevokevoka indray izao ianao io fa hoe nandray andraikitra tamin�ny fanesorana ilay razoky nanao tatitra vilana sy tsy nanao afatsy ny nanadio tena tamin�ny hadalana mihoampampana nataon�ny olom-peheziny e!
Mpianatra ho mpitsara miisa 30 Nampiofanin�ny zandarimariam-pirenena
Nifarana omaly zoma 3 martsa 2017 ny fiofanana fampiharana na � Stage pratique � narahan�ireo mpianatra ho mpitsara miisa 30 mianadahy nampanaovin�ny teo anivon�ny zandarimariam-pirenena.
Fankalazana ny 8 martsa Manazava ny minisiteran�ny mponina
Antomotra ny fankalazana ny fetin�ny vehivavy izay hankalazaina isaky ny 8 martsa. Ho an�ny eto Madagasikara dia mandray anjara mavitrika amin�izany ny minisiteran�ny mponina, sampandraharaharam-panjakana tarihina vehivavy amin�ny alalan�ny minisitra Onitiana Realy.
Zo sendikaly Havadika ho lal�na amin�izay
Ny taona 1978 no nisian�ny fifanarahana laharana faha-151 eo anivon�ny OIT (Organisation Internationale du Travail) mikasika ireo fifandraisan�ny asa ao anatin�ny asam-panjakana na ny zo sendikaly.
Boriborintany faha-4 Hiroso amin�ny fanakatonana ireo tsena tsy ara-dalana
Taorian�ny fidinana ifotony notanterahin�ireo tompon�andraikitra eo anivon�ny Boriborintany faha-efatra nanentana ireo mpivarotra anaty tsena lehibe mbola tsy manana karatra matihanina dia
Fiarovana ny lemaka ao amin�ny PC 23 Nambolena hazo ny sahan-driaka Mavolava
Zanakazo kininina sy Grevelia 2500 fototra no voavoly tao amin�ny sahan-driaka Mavolava ny talata lasa teo.
Vokatra Lojy Fahatelo eran-tany i Madagasikara amin�ny fanondranana
Lalam-pihariana iray isany mampisongadina an�i Madagasikara eo amin�ny sehatra iraisam-pirenena ny lojy na � Black eyes �.
Ministeran�ny vola sy ny teti-bola Namboly hazo 5000 fototra
Namboly hazo teny Andranovelona omaly ny fianakaviamben�ny Ministeran�ny vola sy ny teti-bola notarihin�ny Ministra Rakotoarimanana Gervais. Tafiditra indrindra ao anatin�ny asa tanterahin�ny olom-pirenena amin�ny fiarovana ny tontolo iainana no nanatontosan�izy ireo izay marihina fa efa andiany faha-15 notanterahina tao amin�ity faritra iray ity.
Filohan�ny FIFA, Gianni Infantino Manohana fatratra an�i Ahmad
Kandida tokana mifaninana amin�i Issa Hayatou, filoha am-perinasa, izay efa nitantana ny CAF (Kaonfederasionina Afrikanina momba ny baolina kitra) nandritra ny 28 taona, ary mikendry ny hitantana ity rafitra ambonin�ny baolina kitra ity amin�ny mand� faha-8 indray ny Filohan�ny federasionina malagasin�ny baolina kitra Ahmad Augustin.
Neny teny Mahamasina Nanotrona sy nanome hery ny USCAFOOT
Tonga nanotrona sy nanome hery ny ekipan�ny Kaomina Antananarivo-Renivohitra iadidiany, teny amin�ny kianjaben�i Mahamasika omaly zoma maraina, i Neny Lalao Ravalomanana
Fitateram-bahaoka Haverina ny toerana voatokana
Anisan�ireo nahazo fiofanana tao anatin�ilay atrikasa momba ny tetikasa Lamina na Lalanjotra miaty ny namana izay natao nanomboka ny talata teo ary nifarana omaly tetsy amin�ny Espace Dera
ANKIZY MARENINA Mbola maro ireo tsy tafiditra an-tsekoly
Mbola maro amin�ireo ankizy marenina eto amintsika no tsy tafiditra an-tsekoly. Ny ampahatelon�izy ireny no fantatra fa mba manana fahafahana fa ny ankoatra izay dia mirenireny fotsiny.